ikhaya / Yeyiphi eminye imicimbi yesiqhelo enokuthi ivele ngexesha lenkqubo yoKhetho?
Umcimbi oqhelekileyo endijongene nawo ziindlalifa ezilwa ngee-asethi. Oku kuyenzeka nokuba abantu banayo intando okanye abanayo. Kuyamangalisa indlela abantakwabo bahlala bexabana ngayo into ngaphakathi kwilifa. Ngamanye amaxesha, xa kungekho myolelo, balwa malunga nokuba ngubani oza kuba ngumlawuli kuba becinga ukuba ngokuba ngumlawuli banamandla onke. Umlawuli ufumana ipesenti yendawo yokuhlala, njengoko imiselwe ngummiselo eNew Jersey, kodwa ikwamele ukuba isasaze ii-asethi ngokulinganayo. Omnye umba endiwubonayo ngabantakwenu abadala abacinga ukuba banamalungelo angaphezulu. Ayisiyo indlela esebenza ngayo.
Ngubani onokuCela umngeni kuMyolelo?
Ukuze ube nokuma ucele umngeni kumyolelo, kuya kufuneka uzuze phantsi komyolelo okanye ube ngumntu ophulukana nomyolelo phantsi komyolelo. Kungenzeka ukuba kwenziwe umyolelo kwiintsuku ezintathu ngaphambi kokuba loo mntu asweleke kwaye unqunyulwe. Ngokwesiqhelo, bekukho impembelelo engalunganga. Ekuphela kwabantu abanokucela umngeni kumyozo ngabo banceda okanye baphulukane nawo.
Yeyiphi imijikelezo yokuzisa umyolelo?
Ukuze ungenise ukhuphiswano, kufuneka ube nokuma okokuqala, oko kuthetha ukuba uza kuxhamla okanye ulahlekile phantsi komyolelo. Isizathu sokuqala sokucela umngeni kukusilela ukutyobela umyolelo. Ngokuhambelana nomthetho wombuso eNew Jersey, udinga amangqina amabini kunye ne-notary yoluntu okanye i igqwetha ukuqinisekisa umyolelo. Ungawucela umngeni kumyolelo ngenxa yokuba awuphathwanga kakuhle; Akukho mangqina aneleyo okanye akubangakho mmeli woluntu okanye ligqwetha. Ungayicel 'umngeni intando phantsi komthamo wabavavanyi ngokuthi umvavanyi angabi nako ukuqonda into awayeyitywina. Ke, kukho impembelelo engalunganga, apho umntu ethatha umgcini womvavanyi, ke lowo uvavanyiyo uxhomekeke kakhulu kulowo mntu, kwaye ngequbuliso loo mntu uxhamla kakhulu phantsi komyolelo. Kunokubakho ubuqhetseba, ngokunjalo. Umvavanyi unokuxelelwa ngumntu ukuba batyikitya ibill yesibhedlele okanye olunye uxwebhu xa ngokwenene besayina umyolelo omtsha.
Imigangatho yokucela umngeni mngeni ayikho lula ukubonisa ubungqina enkundleni. Ngokwesiqhelo iba ngamangqina amabini kunye negqwetha elikhona xa lo mntu esayina, ke kunzima ukuphikisana. Ukuba kukho igqwetha elichaze umyolelo phambi kwamangqina, kuya kuba nzima ukungqina enkundleni ukuba bekukho impembelelo engalunganga okanye ubuqhetseba.
Uza kucelwa umngeni nini uA?
Umyolelo unokucelwa umngeni nangaliphi na ixesha, nasemva kokuba ivaliwe. Kuya kufuneka ungqinisise unobangela ogqibeleleyo wolo mngeni, nangona kunjalo, apho kulukhuni khona. Kukho imigaqo ethile yokusikelwa umda. Emva kokuba i-probate ivaliwe, umngeni kufuneka ugcwaliswe kwisithuba seminyaka emibini yomhla wokufakwa kwamatyala.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi Imiba eneNkqubo yokuKhetha eNew York, i iseshoni yesicwangciso sobuchule lelona nyathelo lakho lilandelayo. Fumana ulwazi kunye neempendulo zomthetho ozifunayo ngokufowuna (973) 200-1111 namhlanje.